Qudaarta dahabiga ah ee leh 'hematite' waa gemstone dhif ah - fiidyow
Soo iibso maaddada dahabka ah ee dabiiciga ah ee dabiiciga ah oo leh hematite dukaankayaga
Qudaarta dahabiga ah ee leh "hematite" waa gemstone dhif ah. Rutile iyo hematite ee ku jira rubuc si caadi ah ayaa loo soocay si gooni gooni ah, laakiin marar dhif ah ayaa wada socda.
Quater dahab ah
Quotada dahabka ah ee dahabiga ah ee loo yaqaan 'quartz ritilated' waa noocyo kala duwan oo ah "quartz" oo ka kooban irbado cirbado ah oo u eg mid aan waxtar lahayn. Waxaa loo isticmaalaa gemstones. Kujirooyinkaani badanaa waxay u egyihiin dahab, laakiin sidoo kale waxay u ekaan karaan lacag, gaduud gaduud ama madow madow. Waxaa loo qeybiyaa si aan kala sooc lahayn ama xirmo, kuwaas oo mararka qaar loo qaabeeyo xiddig u eg, oo waxay noqon karaan kuwo firfircoon ama cufan oo jidhka ka dhigaya kuuskuusku dhow. In kasta oo haddii kale ay ka kooban tahay badiyaa waxay yareeyaan qiimaha kristal, rubuc rutized run ahaantii waxaa lagu qiimeeyaa tayada iyo qurxinta waxyaabaha ku jira.
Hematite waa midab madow oo bir ah ama bir-cawlan, bunni ilaa bunni-guduud, ama casaan. Waxaa loo qodayaa inay tahay macdanta ugu muhiimsan ee birta. Noocyada waxaa ka mid ah kalyaha kalluunka, maaddada martida ah, birta birta ah iyo xaddiga macdanta. In kasta oo qaababkani ay kala duwan yihiin, dhammaantood waxay leeyihiin qulqulka casaan-guduudan. Hematite way ka adag tahay bir saafi ah, laakiin aad bay u sii jilicsan tahay. Maghemite waa hematite iyo magnetite macdanta 'oxide macdanta'.
Quotada dahabiga ah ee dahabka leh sida dhammaan noocyada kale ee 'kilz kiloz' waa amplifier, iyo Rutile sidoo kale waa cod-weyne xoog leh.
Awoodda qallafsan ee threads ee xumaanta waxay ku imaan doontaa tamar xoog leh, waxaana lagu daraa rubuc-dhiska oo abuuraya gariir yaab leh. Hawshani waxay kicin kartaa hal-abuurkaaga ruuxiga ah, iyo awoodaada inaad ku muujiso waxa aad rabto noloshaada, adoo adeegsanaya awoodda ujeedada.
Kubbadda dahabka leh ee leh 'hematite', oo ka yimid Brazil